June 20, 2019 - ThutaStar
မိဘနှစ်ပါး တရားစွဲဆိုခံရတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဇင်သဲနိုင်
June 20, 2019 Thuta Star 0
ပိုင်ဇေရဲထွန်းနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်တို့မိသားစုလေးဟာ လက်ရှိမှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတာပါ။ ယနေ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်တို့ကို ယုံကြည်မိရာက မိဘနှစ်ပါးလုံး ဘဏ်မှတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ အနေအထားရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက အတော်လေးပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးရဲထွန်းအကောင့်ကနေပြီး ထိုအကြောင်းကို ရေးသားထားခဲ့တာပါ။ “သားပိုင်ဇေနဲ့ သမီး သဲသဲ မင်းတို […]
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးထိသွားကာ သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ငါးစာဒါနအလှူပြုခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ် …
သူကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာ မိသာစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းနေထိုင်မူကို ပရိသတ်တွေအတွက် သူရဲ့ လူမူကွန်ရက်မှာဖော်ပြလေ့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့မှာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးထိသွားကာ သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ငါးစာဒါနအလှူပြုခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားနှင့်ပစိဖတ်သမုဒယာတွင်နဂါးစာ ငါးစာ ဒါနအလှူပြု၍ မေတ္တာရေ ပရိတ်ရေများသွန်းလောင်းကာ အမျှအတန်းပေးဝေမှုကြောင့် […]
သားဖြစ်သူ ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ဇနီးမောင်နှံကို ယုံကြည်ခဲ့မိလို့ ဘဏ်ကတရားစွဲဆိုခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ မိဘ နှစ်ဦး
အနုပညာရှင်တွေထဲကမှ သာယာပြီးအားကျဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့မိသားစုဟာ အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့စုံတွဲဟာ လတ်တလောမှာတော့ ပြည်ပမှာသွားရောက်အပန်းဖြေအနားယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ပိုင်ဇေရဲထွန်းဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိဘနှစ်ဦးရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်များရေးသားထားတဲ့ စာစုလေးမှာ လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှ တစ်ဆင့်ပြန့်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးရဲထွန်းကိုယ်တိုင်ရေးသားထားပြီး သားဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းကို Tag တွဲရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အိုမင်းကာ စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်နေတဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်တွေကို […]
ကားနေတဲ့ မေးရိုးခွဲစိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ နေမင်း
ကားနေတဲ့ မေးရိုးခွဲစိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ နေမင်း နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေမင်းက အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ အများအပြားမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝ ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက လက်ရှိမှာလည်း သူချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို […]
အသက်(၄၀)ဆိုပေမယ့် အခုထိ နုပျိုလှပနေတဲ့ Chae Rim (သို့) ဆန်းမီ….
တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးချော Chae Rim ကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုတဲ့ သူပါ။သူမ ကိုတော့ ဆည်းဆာရင်ခုန်သံ ( All About Eve) ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲက ဆန်းမီ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ မြန်မာ ပရိ သတ် တွေကြားမှာ လူသိများသူပါ။ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်တာကတော့ […]
တစ်လအတွင်း သိန်း၁၀၀ကျော် တောင်သုံးလိုက်မိလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်..
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွန် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ပိုင်တံခွန်က မော်ဒယ်လ် အလုပ်အပြင် သူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေရှိတာကြောင့် သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်တံခွန် က တစ်လ အတွင်း သူသုံးမိတဲ့ […]
သင့်ဆံကေသာကို အမြန်ဆုံးအရှည်မြန်စေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း…
မင်္ဂလာပါနော်။ မိန်းကလေးတို့ဘုန်း ဆံထုံးဆိုသလို ဆံကေသာရဲ့ အလှဟာ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေ တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးရတဲ့ အလှတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့ချော့မွေ့ပြီး ပျော့ပျောင်းတဲ့ ဆံကေသာကို မိန်းကလေးတိုင်းပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ ဆံကေသာကို အမြန်ဆုံး အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပါနော်။ ပါဝင်ပစ္စည်း […]
တွဲထားတဲ့လက်တွေ ခိုင်မြဲစေဖို့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် မျှတွေးပေးပါ..
ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ရှည်သူဖြစ်ပါစေသူ့မှာလည်း နားလည်ပေးရတာ များလာတော့စိတ်ကုန်သွားတဲ့နေ့ဆိုတာ ရှိလာမှာပဲလေ။ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေသူ့မှာလည်း ပေးဆပ်နေရတာများလာပြီးချစ်ရတာနဲ့ ပေးဆပ်ရတာမတန်တော့ စိတ်ပျက်လာမှာပဲလေ။ ဘယ်လောက်ပဲ သည်းခံတတ်သူဖြစ်ပါစေသူမှန်လည်း သည်းခံ ၊ သူမှားလည်း သည်းခံရတာများလာတော့ တစ်ခါတစ်လေ တုန့်ပြန်ချင်တဲ့နေ့ဆိုတာ ရှိနေမှာပဲလေ။ ဘယ်လောက်ပဲ တော်နေတဲ့သူဖြစ်ပါစေလောကဓံဖိအားပြင်းထန်လွန်းလာရင် သူ့မှာလည်းအားငယ်တဲ့နေ့ဆိုတာ ရှိလာနိူင်တာပဲလေ။ ဘယ်လောက်ပဲ အသည်းမာတဲ့လူဖြစ်ပါတေကယ်ချစ်ပြီး […]
ချစ်သူနှစ်ဦး သေချာပေါက် ပြတ်စဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြနေတဲ့လက္ခဏာများ …
” မကြာခင်မှာ သင်တို့ သေချာပေါက် ပြတ်စဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြနေတဲ့လက္ခဏာများ ” လူတိုင်းဟာ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အချစ်ရေး ပြိုပျက်သွားမှာကို မလိုလားကြပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်တို့အချစ်ရေးမှာ ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြနေပြီ ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ မဟုတ်ရင်တော့ အနှေးနဲ့အမြန် သင်တို့ပြတ်ဆဲသွားနိုင်ပါတယ် နော် ……. (၁) […]
အောင်ရဲလင်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ အလှလေးများ…
ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့ကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းရဲ့ မွေးနေ့လေးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ အောင်ရဲ လင်းရဲ့ အသက် (၃၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပါ။ အောင်ရဲလင်းကတော့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဘုရားသွား ကျောင်း တတ်လုပ်ပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်။ မွေးနေ့တိုင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ အောင်ရဲလင်းကတော့ အသက် (၃၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကိုလည်း အေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲ […]